माओवादी र फोरमको दूर्दान्त अन्त्य
जनताको मुक्ति गर्ने नारा घन्काएर, गरीब, दीन-दुःखी जनतालाई रुमानी सपनामा लडाएर ठड्याएको माओवादी नामको तासको महल गल्र्याम्मगुर्लुम्म ढलेको छ ।
सरकार प्रत्येक नेपालीको हुनुपर्छ । पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषको होइन । भन्न त मान्छेहरु भाषालाई होइन भावलाई बुझ्नु भन्छन तर भाषाले कस्तो कुरा सम्प्रेषण गर्दैछ त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
के हो आदित्यको अलौकिकता ?
पछिल्लो समय हाम्रो समाज सतही, छिपछिपे विश्लेषणमा भासिँदै गएको छ । कुनै विषयमाथिको एकपक्षीय वा पूर्वाग्रही टिप्पणीको संक्रमण झन् झन् ऐजेरुझैँ फैलँदो छ । आदित्यप्रति अरुचि राख्ने र आदित्यको आलोचना गरेर नथाक्नेहरुले एकपटक उनीभित्रको प्रतिभालाई बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् । समालोचना र आलोचना भनेको निन्दा र नकारात्मक टिप्पणी मात्रै होइन बरु त्यसलाई बहुकोणीय चस्माबाट हेर्नु हो । तर हरेक कुरामा नकारात्मकता मात्र देख्नेहरुले खुलम्खुल्ला सत्यताको तेजोबध गरिरहेका छन् ।
घृणा र अपमानलाई प्रेमले नै परास्त गर्न सक्छ
सौहार्द्रतापूर्वक कमजोरी आत्मसाथ गर्नाले विश्वासको वातावरण अरु फराकिलो र हार्दिक बन्छ । प्रेम रुपी हतियार चलाउन गौतम बुद्ध हुनु पर्दैन, महात्मा गान्धी बन्नु पर्दैन, जुनसुकै घर, खानदान, शिक्षित, अशिक्षित, कुलिन अकुलिन, राजा, रंक सबैले सक्ने कुरा हो । मात्र मान्छेको मनभित्र विवेक हुनुपर्छ । विवेकी बन्न जात, धर्म, संस्कृति, रुप, रङ र आकारले बन्देज गर्दैन ।
लोकतन्त्रमा जनता नै खासमा मालिक हुन्छन् र जनताका अपेक्षाहरु जनादेशका रुपमा संसदमा प्रतिविम्वित भइरहेका हुन्छन् । नेपालीका अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । तर पनि मुलुकले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नछोडेको अवस्थामा भने सहज तरिकाले पूरा हुँदै जाने कल्पना गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला नागरिक समाज मन्द छ । कतै पार्टी मार्फत सत्ता चास्नीको आश र लोभमा आ-आफ्नै पार्टी सत्ताको भजनमा क्रियाशील बन्नु उसको बौद्धिक धर्म हो भन्दा वर्तमान प्रति अन्याय हुँदैन ।
खाली दुर्योधनादिलाई सम्झने, भीष्म पितामहलाई गाली गर्ने अनि काल कहिले आउने हो भनेर अधैर्यताका साथ प्रतीक्षा गर्ने ? कति रात त नखाई नखाई बस्नुभयो, कति रात त ननिदाई ननिदाई जाग्राम बस्नुभयो । यी सबै कुराको साक्षी विदुर र म भन्दा पनि सञ्जयलाई थाहा छ ।
मेरो लागि लेख्नु भनेको कुनै न कुनै नयाँ कुरा देख्नु हो । आफ्नो कुराहरु बाँडनु हो । लेखाइका विभिन्न परिकारहरु छन् । जुन परिकारको लेखे पनि हुने रहेछ ।
यो पटकको न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीशलाई दह्रोसँग खुट्टा टेक्न र कानुनी राज्यको अवस्थालाई कतैबाट पनि व्यवधान आउन लागेमा नडराई निर्णय गर्न बल दिएको छ ।